Ny API detection idle ao amin'ny Chrome 94 dia niteraka tsikera | Avy amin'ny Linux
Ny API detection idle ao amin'ny Chrome 94 dia niteraka tsikera
Darkcrizt | 24/09/2021 22:31 | About us
Tamin'ny fanombohan'ny Chrome kinova 94 se nanao ny fampidirana default ny API fanamarinana tsy miasa, izay niteraka onjan'ny tsikera miaraka amin'ny rohy mankany amin'ny fanoherana avy amin'ireo mpamorona ny Firefox sy WebKit / Safari.
Ilay API mamantatra tsy miasa mamela ny tranokala hahita rehefa tsy miasa ny mpampiasa, izany hoe tsy mifanerasera amin'ny keyboard / mouse na miasa am monitor hafa. Mampahafantatra anao ihany koa ny API raha toa ka mandeha amin'ny rafitra ny saverin-tsarimihetsika na tsia. Ny fampandrenesana tsy miasa dia atao amin'ny alàlan'ny fandefasana fampandrenesana aorian'ny nahatratrarana ny ambaratongam-pahefana efa voafaritra mialoha, ny sandany kely indrindra dia napetraka ho 1 minitra.
Zava-dehibe ny mampifantoka ny sainy ny fampiasana ny API mamantatra tsy miasa dia mitaky fanomezana mazava ny mombamomba ny mpampiasaIzany hoe, raha toa ka manandrana mamaritra ny zava-misy tsy miasa ny voalohany, dia haseho ny mpampiasa amina varavarankely misy sosokevitra hanome alalana na hanakana ny asa.
Fampiharana chat, ny tambajotra sosialy sy ny fifandraisana dia antsoina hoe application, izay afaka manova ny satan'ny mpampiasa miankina amin'ny fisiany amin'ny solosaina na manemotra ny fampisehoana fampandrenesana hafatra vaovao mandra-pahatongan'ny fahatongavan'ilay mpampiasa.
Ny API dia azo ampiasaina amin'ny rindranasa hafa hiverina any amin'ny efijery voalohany aorian'ny fotoana tsy fampiasana manokana, na hampiatoana ny asa aman-dresaka mifandraika amin'ny loharanon-karena, toy ny famerenana ireo tabilao sarotra izay havaozina tsy an-kijanona raha tsy eo amin'ny efijery ilay mpampiasa. solosaina.
Ny toeran'ireo izay manohitra ny fampandehanana ny API tsy fahitana hetsika mipoitra ny zava-misy fa ny fampahalalana momba ny hoe ao anaty solosaina na tsia ny mpampiasa dia azo heverina ho tsiambaratelo. Ho fanampin'ny fampiasana mahasoa, ity API ity dia azo ampiasaina ihany koa tsy ho amin'ny tanjona tsara, ohatra, mba hanandramana hitrandraka fahalemena raha tsy eo ilay mpampiasa na manafina hetsika ratsy hita toa ny fitrandrahana.
Mampiasa ny API resahina, Azo angonina koa ny mombamomba ny lamin'ny fitondran-tena an'ny mpampiasa sy ny gadona isan'andro amin'ny asany. Ohatra, azonao atao ny mamantatra rehefa matetika ny mpampiasa misakafo atoandro na mandao ny toeram-piasana. Ao anatin'ny tontolon'ny fangatahana fanamafisana alàlana tsy maintsy atao dia heverin'i Google ho tsy misy dikany ireo ahiahy ireo.
Mba hanafoanana tanteraka ny API detection idle dia misy safidy manokana omena ao amin'ny fizarana "Privacy sy fiarovana" amin'ireo faritra ("chrome: // setting / content / idleDetection").
Ankoatra izany, Tsy maintsy raisintsika ny fanamarihana avy amin'ny mpamorona Chrome momba ny fandrosoan'ny teknika vaovao hiantohana ny fitantanana fahatsiarovana azo antoka. Araka ny Google, 70% ny olana ara-piarovana ao Chrome dia vokatry ny hadisoana fahatsiarovana, toy ny fampiasana aorian'ny fidirana maimaim-poana amin'ny buffer. Paikady telo lehibe hiatrehana ny lesoka toy izany no fantatra: ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny fotoana fanoratana, fanakanana ireo hadisoana mandritra ny fotoana fohy ary fampiasana fiteny azo antoka ho fahatsiarovana.
Voalaza fa nanomboka ny fanandramana nanampy ny fampivelarana ireo singa amin'ny fiteny Rust amin'ny codebase Chromium. Ny kaody Rust dia mbola tsy tafiditra ao amin'ireo fanangonana natolotra ny mpampiasa ary ny tanjony voalohany dia ny fitsapana ny fahafaha-mivelatra ny faritra tsirairay amin'ny tranokala ao amin'ny Rust ary hampifangaro azy ireo amin'ny sisa amin'ireo faritra voasoratra ao amin'ny C ++.
Mifanaraka amin'izany, ho an'ny kaody C ++, ny tetikasa dia manohy mivoatra amin'ny alàlan'ny karazana MiraclePtr fa tsy tondro mivaingana hanakanana ny fahafaha-manararaotra ny fahalemena ateraky ny fidirana amin'ireo tadidy fahatsiarovana efa navotsotra, ary misy fomba vaovao aroso mba hahitana lesoka eo amin'ny sehatra fanangonana.
Ankoatra izany, Google dia manomboka fanandramana hitsapana ny fahatapahan'ny tranonkala rehefa avy nahatratra kinova telo ny browser fa tsy roa.
Manokana, ny toerana "chrome: // flags # force-major-major-to-100" dia niseho tao amin'ny kinova fitsapana Chrome 96, raha voafaritra ao amin'ny lohateny User-Agent, ny kinova 100 (Chrome / 100.0.4650.4. XNUMX) dia aseho. Tamin'ny volana aogositra, andrana iray mitovy amin'izany no natao tao amin'ny Firefox, izay nanambara ny olana amin'ny fikirakirana kinova telo-pejy amin'ny tranonkala sasany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Ny API detection idle ao amin'ny Chrome 94 dia niteraka tsikera
Akira: Fampiharana Linux loharano misokatra ho an'ny famolavolana UI sy UX
Google dia efa nanome daty hamaranana ny fampifanarahana ny kinova 2 an'ny Chrome Manifest